ओली दाहाल संवादहिनता टुट्योः मन माझियो, अविश्वास कायमै - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
ओली दाहाल संवादहिनता टुट्योः मन माझियो, अविश्वास कायमै
आइतबार, कात्तिक १६ २०७७
शुक्रबार दिउँसोसम्म नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको निवास खुमलटारमा अर्का अध्यक्ष केपी ओली पक्षीय नेताहर धाइरहेका थिए । दाहालको सचिवालयका अनुसार अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली शुक्रबार बिहान मात्रै खुमलटार पुगे ।
यसअघि पार्टी महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेकपा दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि ओलीको दूत बनेर खुमलटार पुगेका थिए । बुधबार उपनेता नेम्वाङ र अर्थमन्त्री पौडेल र बिहीबार लुम्बिनी प्रेदशका मुख्यमन्त्री पोख्रेल खुमलटार पुगेका थिए ।
तीन दिनदेखि आलोपालो जस्तै गरी गइरहेका उनीहरुको काम ओली दाहाल सम्वाद पुनः सुरु गराउनु थियो । तर शुक्रबार साँझसम्म पनि दाहालले टसमस गरेका थिएनन् । दाहाल निकटका एक नेताले सोही दिन पंंतीकारसँग भनेका थिए, ‘कार्यकारीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्नु वा नभेट्नुको कुनै अर्थ छैन । ‘भेटवार्ता गरेर के गर्ने ? ‘भेटघाट गर्ने, एउटा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ? निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्ने ? मनपरि गर्ने ? एउटा निर्णय गरेर काम चाँहि अर्कै गर्नलाई किन भेटिरहनु पर्‍यो ?’
तर त्यसको भोलिपल्टै अध्यक्ष दाहाल र ओलीबीच लामो समयको संवादहिनता तोड्दै भेटवार्ता भयो । १२ दिनदेखिको संवादहीनता तोड्दै शनिबार दिउँसो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न दाहाल बालुवाटार पुगे । करिब डेढ घण्टा चलेको वन टु वन वार्ताले कुनै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन ।
दाहालले एक्लाएक्लै छलफल भन्दा सचिवालयकै बैठक बोलाउन प्रस्ताव राखेका गरे । प्रचण्डले बैठकको अन्तिमसम्म पनि सचिवालय बैठक बस्नुको बिकल्प छैन भन्दै अडान लिएपछि महासचिव विष्णु पौडेलसँग सल्लाह गरेर बैठकको मिती तोकौँला भन्दै ओली उठेका थिए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री र भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्तकुमार गोयल भेटवार्ता, पर्सामा कार्यकर्ता हत्या प्रकरण, कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद, पार्टी एकताका बाँकी काम र कोरोनाको महामारीका विषयमा छलफल भएको स्रोतले बतायो।
मन माँझियो, अविस्वास कायमै
ओली दाहाल संवालमा अध्यक्षद्वयबीच मन माँझ्ने काम मात्र भयो । तर वार्ता विना निष्कर्ष सकिएको छ । छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको र सचिवालय बैठक बोलाएर पछिल्लो समय देखिएका विवादको समाधान खोज्ने भन्दै बैठक टुंगिएको दाहाल निकट स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार नेकपाभित्रको जारी विवाद समाधानबारे छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि सचिवालय बैठक बोलाएर छलफल गर्ने प्रस्ताव दाहालले गरेका थिए । तर, सचिवालय बैठक कहिले बस्ने भन्ने मिति तय भएको छैन । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा पछिल्लो पटक देखिएका विवाद समाधानका लागि बैठक बोलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष दाहालले भेटमा प्रवक्ताको माग बमोजिम बैठक बोलाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
सचिवालय बैठकमा दाहाल पक्षले ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने तयाररी गरेको छ । सचिवालयमा दाहाल पक्षको बहुमत छ । हाल नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्प कमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरु खनाल, नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासहित नौ सदस्यीय सचिवालय छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, कात्तिक १६ २०७७ ११:३९:३८